Mid ka mid ah Micjisooyinka Kubadda Cagta oo Camp Nou ka dhacday (Warbixin) - iftineducation.com
Mid ka mid ah Micjisooyinka Kubadda Cagta oo Camp Nou ka dhacday (Warbixin)
aadan21 / April 29, 2012
iftineducation.com – Lugta labaad ee Semi finalka horyaalka yurub ayaa waxaa isku fara saaray kooxaha Barcelona iyo Chelsea oo ka kala dhisan Spain iyo England.
Ciyaarta waxa ay ka dhacday daqiiqado ka hor Garoonka ugu weyn Qaaradda yurub ee Camp Nou oo ay leedahay Kooxda Barcelona, waxaana Ciyaarta 1-0 ku hogaamineysay Chelsea oo lugtii hore kusoo badisay garoonkeeda.
Barca waxaa u suurta gashay in qeybta hore ee Ceayaarta dhaliso 2 gool, taas oo siisay Fursadda ugu fiican oo ay ugu gudbi kartay finalka, waxaana u sii dheereed in Garoonka laga saaray John Terry oo ahaa kabtanka kooxda Blues isla qeybta hore ee cayaarta.
Ramires ayaa neefta kusoo Celiyay Taageerayaasha Galbeedka London markii uu gool qurux badan daba mariyay Victor Valdes dhamaadka qeybta hore ee Cayaarta.
Chelsea oo xeratay Difaac adag oo aan la mari karin ayaa waxaa lagu helay Rigoore billowga qeybta labaad ee cayaarta, taas oo uu qasaariyay Xiddiga aduunka Messi.
Dhamaadka Ciyaarta ayaa waxaa daadka raacsiiyay Boqolkii Kun ee ku sugnaa Garoonka Camp Nou, Fernando Torres oo badal kusoo galay Ciyaarta, markii uu dhaliyay goolkii labaad ee Kooxda Chelsea.
Kooxdan uu sida kumeel gaarka ah u leyliyo roberto Di Matteo ayaa waxa ay ku badisay isku cel celis labada Kulan 3-2, waxa ayna 19-ka May Finalka kula Ciyaari doontaa Magaalada Munich kooxaha Real Madrid iyo Bayer Munich tii soo baxda.
Ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee Garoonka waxaa loo magacaabay gool-ilaaliyaha Chelsea Peter Cech, halka Xididgii ugu Xumaa ee garoonka la siiyay Kabtanka Blues John Terry.
Waxaa lagu tilmaamay Ciyaartan mid ka mid ah Lama filaanka iyo Mucjisooyinka kubadda Cagta, markii ay garoonka ka baxeen iyagoo hoos fiirinaaya Xiddigaha ugu Caansan aduunka Xilligan ee Messi, iniesta iyo Xavi.
Kooxda Chelsea guud ahaan marka la isku daro Baasaska dhameystiran oo ay sameysay Ciyaartan waxa ay aheyd 117, halka Xiddiga qadka dhexe ee Kooxda Barcelona Xavi kaligiis uu sameeyay 140 baas oo dhameystiran, waxaana Ciyaarta ku dhamaatay 2-2, waa mid ka mid ah la yaabka lagu arkay Ciyaartan.
Terry oo Calaamadda Casaanka ah qaatay qeybta hore ee Cayaarta ayaa ka raali galiyay dhamaan Taageeryaashiisa qaldkii uu sameeyay, isagoo qirtay in uu sax ahaa go’aankii Garsooraha.
Torres ayaa laga soo xigtay “Muhiim maaha markasta in ay badiso kooxda Ciyaar wanaagsan”, waxa uuna Xiddigaan ku dhaliyay Garoonka Barcelona goolkiisii 5-aad 4-tii kulan ee u dambeysay ee uu ku cayaaray.
Barcelona waa markii u horeysay muddo 20 sano ah oo looga badiyo tartamada Yurub Ciyaar ay 2 gool la hor martay, waxaana ugu dambeysay 1992-dii markaas oo CSKA Moskow ku garaacday 3-2.
Inkastoo Chelsea Finalka soo gaartay hadana waxaa ka maqnaan doona Kulanka kama dambeysta ee 19-ka May Xiddigaheeda muhimka ah sida Terry, Ivanovic, Ramires iyo Mereless oo dhamaantood Calaamadha ganaaxa qaatay Kulankii Caawa.
Barca oo koobkan Difaacaneyso ayaa lasoo af jaray guulaheedii isdaba jooga ahaa oo ay ka gaareysay kooxaha Ingiriiska iyo waliba Yurub.
6-Qodob Oo Ragga Ku Qasabta In Ay Haweenka Khiyaanaan!!
Nin habeen qura la aqal galay 2 Gabdhood oo ay qaraabo yihiin (Daawo Sawirada Arooska)